हिमाल खबरपत्रिका | ‘कारागार यातना गृह जस्ता छन्’
‘कारागार यातना गृह जस्ता छन्’
कारागारहरूको अनुगमन गरेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक भन्छन्, “कारागारमा बन्दीलाई न्यूनतम आधारभूत सुविधा समेत छैन।”
कारागारको अनुगमनका क्रममा त्यहाँभित्र के देख्नुभयो ?
नेपालमा जम्मा ७४ वटा कारागार छन् । तिनको कुल क्षमता ८ हजार बन्दीको हो । सरकारले १२ हजार भनिरहेको छ । तर, यी कारागारमा अहिले २० हजार १०० बन्दी छन् । कुनै कारागारमा क्षमताभन्दा ८ गुणासम्म बढी बन्दी राखिएको छ । त्यसमाथि कारागार, कारागार जस्तै छैनन् ।
किन कारागार, कारागार जस्ता भएनन् ?
१०–१२ वटा बाहेक सबै कारागार भवन अन्य प्रयोजनका लागि बनाइएका हुन् जसलाई पछि कारागारमा परिणत गरियो । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा रहेको कारागार कुनै बेला घोडा बाँध्ने तबेला थियो, घाम देख्नै नपाइने धनकुटा कारागार त एक दिनका लागि मात्रै पनि बन्दी राख्न उपयुक्त छैन । यस्ता अनुपयुक्त कारागार धेरै छन् । मानिस बस्न लायक नभएको ठाउँलाई कसरी कारागार भन्ने !
अरु असुविधा के के छन् ?
सरकारले कानून अनुसार थुनिसकेपछि उनीहरूलाई त्यस अनुसारको सेवा–सुविधा दिनुपर्दछ । धेरै कारागारमा पानीको अभाव छ । बर्खाको समयमा बन्दीहरू कारागारमा बस्न सक्ने अवस्था नै छैन । अपाङ्ग, रोगी, वृद्ध सबैलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । सुधारगृह बन्नुपर्ने कारागार यातना गृह जस्ता छन् ।
कारागारभित्र मानवअधिकारको स्थिति कस्तो छ ?
मानवअधिकारको स्थिति राम्रो छैन । बन्दीहरूलाई दिइने सिधा रकम पर्याप्त छैन । पिउनेपानीको अभाव छ । शौचालयको अवस्था राम्रो छैन । एक जना व्यक्तिको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्ति समेत नहुने अवस्था छ । ७०–८० वर्षका वृद्धलाई गरिने व्यवहार अरुभन्दा फरक छैन । ज्येष्ठ नागरिक ऐनको पालन भएको छैन ।
मानवअधिकार आयोग के गरिरहेको छ ?
कारागारभित्रको अनुगमन हाम्रो नियमित कार्यक्रम हो । हामीले दुई वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छौं । कारागारमा भएका कमी–कमजोरी सुधार गर्नका लागि गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पटक–पटक भनेका छौं । हामी आफैंले नेपाल प्रहरीका अधिकारी साथै जेलरहरूलाई राखेर प्रशिक्षण दिन पनि शुरु गरेका छौं ।